Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Amos 3
Nepali New Revised Version, Amos 3
1 हे इस्राएलका मानिस हो, परमप्रभुले तिमीहरूका विरुद्धमा भन्‍नुभएको यो वचन सुन, अर्थात्‌ मिश्रदेशबाट मैले ल्‍याएका सारा परिवारका विरुद्धमा,
2 “पृथ्‍वीका सबै परिवारहरूमध्‍ये मैले केवल तिमीहरूलाई मात्र चुनेको छु। यसैकारण तिमीहरूका सबै अधर्मका लागि म तिमीहरूलाई दण्‍ड दिनेछु।”
3 के दुई जना आपसमा सहमत नभएसम्‍म सँगसँगै हिँड्‌छन्‌ र?
4 के शिकार नभए झाड़ीमा सिंह गर्जन्‍छ र? केही फेला नपारीकन त्‍यो आफ्‍नो ओड़ारमा ङ्यार्रडुर्र गर्छ र?
5 के भूइँमा पासो नथापीकनै चरो त्‍यसमा पर्छ र? के समात्‍नलाई केही नभएसम्‍म धराप भूइँबाट माथि उछिट्टिन्‍छ र?
6 कुनै सहरमा के तुरही फुकेपछि मानिसहरू डराउँदैनन्‌ र? परमप्रभुले नपठाएसम्‍म के कुनै सहरमा विपत्ति आउँछ र?
7 निश्‍चय नै परमप्रभु परमेश्‍वरले आफ्‍ना दास, अगमवक्ताहरूलाई आफ्‍नो रहस्‍य प्रकट नगरीकन केही गर्नुहुन्‍न।
8 सिंह गर्जेको छ, को डराउँदैन? परमेश्‍वर बोल्‍नुभएको छ, कसले अगमवाणी नबोली छोड्‌दैन र?
9 अश्‍दोदका किल्‍लाहरू र मिश्रदेशका किल्‍लाहरूलाई घोषणा गर: “सामरियाका पहाड़हरूमा तिमीहरू भेला होओ। त्‍यहाँभित्र भएको ठूलो खैलाबैलालाई र त्‍यसका मानिसहरूका बीचमा भएको अत्‍याचारलाई हेर।”
10 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “तिनीहरू ठीक काम गर्न जान्‍दैनन्‌। तिनीहरू लूट र डकैतीका माल आफ्‍ना किल्‍लाहरूभित्र सञ्‍चय गर्छन्‌।”
11 यसकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “एउटा शत्रुले देशलाई चढ़ाइ गर्नेछ, त्‍यसले तेरा गढ़ीहरूलाई नाश गर्नेछ, र तेरा किल्‍लाहरू लुट्‌नेछ।”
12 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “जसरी गोठालाले सिंहको मुखबाट खुट्टाका दुई हड्डी अथवा कानको एक टुक्रा मात्र छुटाउँछ, त्‍यसरी नै सामरियामा पलङ्गको किनारमा र आफ्‍ना गद्दीका कुनामा बस्‍ने इस्राएलीहरू छुटाइनेछन्‌।
13 “यो सुन, र याकूबका घरानाको विरुद्धमा यो गवाही देऊ,” सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु परमेश्‍वर घोषणा गर्नुहुन्‍छ।
14 “जुन दिनमा इस्राएललाई त्‍यसका पापहरूका लागि दण्‍ड दिनेछु, म बेथेलका वेदीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु, र वेदीका सीङहरू च्‍वाट्टै काटिएर भूइँमा खस्‍नेछन्‌।
15 म हिउँदमा बस्‍ने निवासस्‍थान र गर्मीमा बस्‍ने निवासस्‍थान दुवै सर्वनाश गर्नेछु, र हस्‍तिहाड़ले सिँगारिएका घरहरू नष्‍ट हुनेछन्‌, र भवनहरू भत्‍काइनेछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
Amos2Choose Book & Chapter Amos 4